Sidee Arsenal ugu guuleysan kartaa Premier League xilli ciyaareedka cusub?…( Jack Wilshere ayaa jawaabta kuu haya) – Gool FM
Sidee Arsenal ugu guuleysan kartaa Premier League xilli ciyaareedka cusub?…( Jack Wilshere ayaa jawaabta kuu haya)
Byare August 11, 2016
(London) 09 Agoosto 2016. Arsenal ayaa kaalinta labaad ku dhammeysatay horyaalka Premier League ee kal ciyaareedkii la soo dhaafay.
Jack Wilshere ayaase aaminsan in kooxdiisu ay ku guuleysan karto horyaalka xilli ciyaareedka cusub ee bilaabanaya usbuuca soo socda, laakiin waa haddii ay iska ilaaliso dhibcaha bilaa micno darrada uga lumaya sida sanadii la soo dhaafay oo kale.
Xiddiga reer England ee dhaawaca ku seegay inta badan xilli ciyaareedkii tagay ayaa rumeysan in Gunners u baahan tahay inay diirada saarto kooxaha yar yar haddii ay dooneyso inay ku guuleysato horyaalka xagaaga cusub.
“Waxaa jira waxyaabo yar yar ay tahay inaan ka shaqeyno,” Wilshere ayaa sidaa yiri.
“Aniga ahaan tan ugu wayn waa haddii aad dib u eegto kulamada xilli ciyaareedkii hore waxaana luminay dhibco kulamo la filayay inaan badineyno.
“Waa inaan diiarada saarnaa, isla markaana kulan kasta u qaadanaa sida mid dhab ah.
“Kaddib markii aan Leicester ku garaacnay gurigooda xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, xoogaa dhibco ayaan luminay, xilli ciyaareedkan ma ogolaan karno inay taa oo kale dhacdo, haddii aan iska diidno inay taa oo kale dhacdo waan qaadi karnaa horyaalka.”.
Milan oo maamineysa Mangala iyo Bocca oo baaqi sii ahaan doona
Tababaraha cusub ee xulka Argentina oo la kulmay Messi iyo Mascherano…(Maxaa laga hadlay, Miyay dib ugu soo laaban doonaan xulkooda?)